Mety hanokatra ity Mailaka ity angamba ianao | | Martech Zone
Mety hanokatra ity Mailaka ity angamba ianao…
Alakamisy, May 15, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Androany tamin'ny alàlan'ny mailako dia nahazo valopy manga izay nisy ny anarako sy ny adiresiko voadidy tsara teo aloha. Ny adiresy valin-kafatra dia PO Box fa toa nosoratana tanana ihany. Rehefa navadiko ilay valopy, dia nasiana tombo-kase famantarana ny Hallmark. Nahazo ny tsara indrindra tamiko ny te hahafanta-javatra ary nosokafako izany hahitako karatra misy ity hafatra manaraka ity:
Ity dia teknolojia fanaovana sora-tanana ary tena nahavoa ilay izy mivantana namany Sary sary nandritra ny roa taona lasa. Ireo mpivarotra mivantana dia mahalala fa raha manokatra anao amin'ny mailaka ianao, dia mahay mamaky ilay sombin-taratasy ianao. Raha mamaky ilay sombin-javatra ianao, dia mahay miantso kokoa. Raha miantso ianao dia mety hividy. Manomboka amin'ny fisokafana daholo anefa izany!
Ny antony tsy mampino an'io endritsoratra io dia ny fomba tsy fitovian'izy ireo amin'ny haben'ny litera mitovy (zahao ny 'e' amin'ny hafainganana), sy ny elanelana amin'ny taratasy (samy kerning ary ampy). Ny teknika dia misarika ny sainao tokoa, misy fahasamihafana ampy amin'ny karazany mahazatra mba hamitahana anao hieritreritra fa nosoratana an-tanana izy io.
Fomba iray mora hilazana fa tsy izany dia ny elanelany tena mifanelanelana ary mahitsy tsara. Tsy isalasalana fa hovaina ihany koa ireo saro-takarina ireo amin'ny ho avy. Na izany na tsy izany, dia sanganasa tsara tarehy io ary azoko antoka fa hampiova fanantenana kely izany. Tsy liana aho satria mety hifindra tsy ho ela.
Tags: sarintany fifantohanadiscuzzfacebook edgerankGravatarfandaharana pejy fitateranafanandramana marobeNy fanodinana fiteny voajanaharyPDFfitantanana pdfTom Foremski
Manararaotra ny Internet Analytics
May 15, 2008 ao amin'ny 10: 09 PM
Miandrasa fotsiny mandra-pahalalan'ny mpanjifa an'io ary manomboka tsy miraharaha izany. Ny dingana manaraka dia ho an'ny orinasa ny outsource amin'ny mpanoratra taratasy any India. Ny mailaka mivantana dia ho soratana tanana. Tonga ny zava-drehetra. Andraso fotsiny.
May 16, 2008 amin'ny 6: 17 AM
Ny tena mahaliana dia vitsy dia vitsy ny zavatra 'sora-tanana' azoko amin'ny alàlan'ny snail-mail ka mety ho marina ny faminanianao.
Raha ny momba ny outsourcing ho an'i India – miaraka amin'ny toe-karena mivoatra sy ny dolara amerikana midina, dia lasa lafo kokoa ny fandefasana entana any India – indrindra fa maro ny Indiana no nahita fianarana tsara (imbetsaka any Etazonia). Nahavita tsara ny tenany i India! Tsy azoko antoka fa izy ireo no mety ho vinavina ho an'ity outsourcing ity, saingy tsy misalasala aho fa misy firenena ambany fidiram-bola hafa mety ho tonga eo amin'ny latabatra miaraka amin'io karazana vahaolana io.
May 16, 2008 amin'ny 6: 49 AM
Azo antoka fa efa telo volana no niandrasako ny fanasana U-verse ary azonao atao eo anoloako izany ary tsy tianao izany. Aiza ny rariny amin'izany?!? TPT.
May 16, 2008 amin'ny 7: 17 AM
Ny iray amin'ireo namako dia miasa amin'ny U-verse ary nilaza izy fa tena lasibatra manokana ho an'ny tokantrano izany noho ny bandwidth sy ny halaviran'ny fitaovana fampitaovana. Nolazainy tamiko ara-bakiteny hoe ny mpifanila trano aminao dia mety manana izany fa mety tsy ianao. Heveriko fa miasa amin'ny olan'ny fotodrafitrasa eny amin'ny manodidina ka hatrany amin'ny manodidina izy ireo. Mety ho tafiditra aho satria mipetraka ao amina trano iray amin'izao fotoana izao – avo lenta!
May 16, 2008 amin'ny 7: 51 AM
Ahoana àry no ahazoantsika an'io endritsoratra io? Efa afaka mieritreritra drafitra iray tiako hampiasaina amin'ny…
(Eny, valintenin'ny mpamorona sary mahazatra.)
May 16, 2008 amin'ny 10: 39 AM
Raha lehilahy mpiloka aho dia manana $10 amin'ny Filipina ho toy ny toerana outsourced.
Ny fivoarana manaraka dia ho an'ny fitaovana fanaraha-maso izay azo ampiasaina hamantarana ny valopy nosokafana, raha nosokafan'ny lahy na vavy, ny taonan'ilay olona ary ny fotoana nandraisany azy niaraka tamin'ny fako.
May 16, 2008 amin'ny 10: 55 AM
Na dia hitanao ho fironana ara-barotra mampientam-po aza izany, dia hitako ho toy ny pox izany. Ny teknika hamitahana ny olona mba hisarika ny saina dia tsy karazana teknika mahaliana ahy hampiasaina. Azo antoka fa mety hahomby amin'ny fotoana fohy izy ireo, saingy tiako ny olona handinika ny kalitaon'ny marikako sy ny zavatra atolotro, fa tsy noho ny vendrana sasany nieritreritra fa nandefa taratasy nosoratan-tanana ho azy ireo aho. JWTCW.
May 16, 2008 ao amin'ny 12: 05 PM
Tsy azoko antoka hoe taiza no nolazaiko fa fironana ara-barotra mampientam-po izany ary tsy nampiroborobo izany aho. Tsy miombon-kevitra aminao aho, naneho hevitra fotsiny momba ny teknolojia aho - na dia nidera azy aza. Izaho rahateo no adala izay nitsindrona.